Umculo welizwe lomKristu
Umbuzo: Yiyiphi iMusic Country Music?
Impendulo: NjengomKristu we-bluegrass, ilizwe lamaKristu likwabelana ngesiteyimu kunye neendlela zokuzikhethela ngokwasemhlabeni ngenxa yoluhlobo olusisiseko sokholo. Abaninzi beemvumi zomculo belizwe bawela kwii-Christians ukukhutshwa rhoqo kangangokuthi ngokwenene kuya kuba neenkonzo ezimbini zokubhabhisa - enye yokubhenela iikonkethi zelizwe kunye nokuya kubhala iikhonsathi zamaKristu.
Umculo welizwe, ngeengoma, ngokubhekiselele kubomi benene kunye nabaninzi, ubomi boqobo kubandakanya ukuphuka kwentliziyo kunye nokholo olubafumanayo.
Ewe, i-sub-genres yomculo welizwe lomhlaba "honky tonk" kunye "nelizwe elingekho mthethweni" kakhulu malunga nokusela nokugubungela impumlo yakho "ekusungulweni," kodwa umculo welizwe namhlanje awukho mthethweni kunye no-Godlaw more. Khawubheke nje abaphumeleleyo beDove Award Abadlali base-Oak Ridge Boys, uCharlie Daniels, uGlen Campbell, uRandy Travis noCarrie Underwood, kwaye uya kukhangela ngokukhawuleza ukuba kukho ukholo oluninzi olufumaneka kuMculo welizwe.
I-Adeve Award yokuqala ye-Albhamu yeSizwe yoNyaka yanikezelwa ngo-1988. Ngomnyaka ozayo iNkcazo yokuqala yeNgoma yomnyaka wanikwa. I-Christian Country Music Association yasungulwa ngo-1990 kunye neminyaka emithathu kamva, i-Award yokuqala ye-Inspirational Country Music Awards yabanjwa, ihlonipha i-Songwriter yeNyaka, iQela loNyaka, iNgoma yeSizwe yeNgqungquthela yonyaka, i-Vocalist yeTyhini yonyaka, i-Vocalist yamaMadoda. woMnyaka kunye nabaPiyona beSizwe soMculo bamazwe.
Abaculi bamazwe abathandekayo bamazwe angamaKristu namhlanje:
UJeff noSheri Easter (nabo bayathandwa kwiBluegrass)
Abaculi beLizwe eliPhambili ngokuKhutshwa kobuKristu:
Isiqalo selizwe lamaKristu
"Yiza KuYesu" - Iphuzu Lobomi
"Ukudanisa noDelila" - uJames Payne
"Ndithembele Nam Kodwa" - UJason Crabb
"Ndibambe Isandla Sakhe" - iDel Way
"UYesu uthathe iGulane" - uCarrie Underwood
"Ndisindise indawo" - Inkunzi engavumelekanga
"Isizathu" - iDayim Rio
"Xa Ndiya Kulapho Ndiya khona" - UBrad Paisley f / Dolly Parton
"Awunayo Ixesha Elihle" - Randy Travis
Iimvumi zelizwe lamaKristu ezikhuthaziweyo
Iingelosi Phakathi Kithi: Iimvumi & IiVangeli eziMnandi -Arabama
Izikhumbuzo ezixabisekileyo - uAlan Jackson
I-Sweet Sound - I-Charlie Daniels Band
Isizathu- iDayim Rio
Ukuphakama nokuKhanya - Randy Travis
Inqaku likaGrace Top 10 Iingoma zeKrismesi
I-Avenue yeNyakatho yeNyakatho yeNew
Ukuba Uthanda Amaqabane Amadoda Aqhutywa Ngama Piano KwiMculo Yakho YamaKristu ....
Udliwano-ndlebe kunye neeNcwadi zikaThixo uMlawuli uPatrick Doughtie
Iimvumi zeKrismesi ezinokufunda ngokomoya
Izakhiwo zokuKhulu eziKhulu ze-Little Archityke
10 Iincwadi eziHlelelekileyo zeMithi kunye namaHlathi kunye neeNcwadi zokuHlola
Iindlela zokutya eziPhezulu zeDancers
Hatshepsut Wafa Njani?
Ukuchaza ukuFunda nokuBhala
Indlela yokulungisa i-Car yakho yohambo lweNdlela
IJografi yeSan Marino